နှာစေး၊ခြောငျးဆိုးနဲ့ လညျခြောငျးနာအတှကျ ဇီယာ - OnDoctor
By Thet Aung Dr.	 On Nov 12, 2018
နှာစေး၊ချောင်းဆိုးနဲ့ လည်ချောင်းနာအတွက် ဇီယာ
ဇီယာရွက်ထူပင်ကို အင်္ဂလိပ်လို Country borage,Indian borage,Mexican Mint,Spanish thyme စသဖြင့်အမျိုးမျိုးခေါ်ကြပါတယ်။
ရုက္ခဗေဒနာမည်ကတော့ Coleus aromaticus Benth. ဖြစ်ပါတယ်။
မျိုရင်းကတော့ Labiatae ပါ။
မြန်မာနိုင်ငံအနှံအပြားမှာ အလေ့ကျပေါက်ပင်အနေနဲ့သော်လည်းကောင်း စိုက်ပျိုးပင်အနေနဲ့သော်လည်းကောင်း တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။
နှစ်ရှည်ခံပင်ပျော့ ပင်ငယ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အရွက်မှာထူပြီး မျက်နှာပြင်နှစ်ဖက်စလုံးမှာ အမွှေးနုလေးတွေပါရှိပါတယ်။အရွက်ပုံစံက ဘဲဥပုံရှိပြီး ကြီးမားကျယ်ပြန့်ပါတယ်။ရွက်နားတွန့်ရှိပြီး စူးရှရှရနံ့ရှိပါတယ်။အပွင့်မှာအလွန်သေးငယ်ပါတယ်။အသီးအနေနဲ့တော့ရှည်လျားပြီး အမြှောင်းခြောက်မြှောင်းပါရှိပါတယ်။
ဇီယာရွက်ထူပင်မှာ Volatile oil,diterpenes(forskolin)စတဲ့ဓါတုဒြပ်ပေါင်းတွေပါဝင်ပါတယ်။
ဒီလိုဒြပ်ပေါင်းတွေပါတဲ့အတွက် ဇီယာရွက်ထူပင်ဟာ ဘက်တီးရီးယားပိုးများကိုသေစေနိုင်သောအစွမ်းသတ္တိ၊လေရှုပြွန်ကိုကျယ်စေသောအစွမ်း၊ရောင်ရမ်းနာကျင်မှုတွေကိုလျော့ပါးသက်သာစေသောအစွမ်းသတ္တိ တွေရှိပြီး ကျန်းမာရေးအတွက် အလွန်အထောက်အကူပြုပါတယ်။
ဇီယာရွက်ထူပင်ကို နှာစေချောင်းဆိုးရောဂါ၊ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ၊၀မ်းပျက်ဝမ်းလျှောရောဂါ၊၀မ်းကိုက်ရောဂါ၊နားရောဂါတို့အတွက် တိုင်းရင်းဆေးဖော်စပ်ရာမှာ တခြားဆေးဘက်ဝင်အပင်ပစ္စည်းတွေနဲ့အချိုးကျရောပြီး သုံးလေ့ရှိပါတယ်။
ဇီယာရွက်ထူပင်ရဲ့အိမ်တွင်းသုံးဆေးမြီးတိုအနေနဲ့ အသုံးဝင်ပုံကတော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
ချောင်းဆိုးတာ၊လည်ချောင်းနာတာဖြစ်ပါက ဇီယာရွက်ထူပင် အရွက်ကိုရေစင်အောင်ဆေးပြီး
အရွက်အစိမ်းလိုက် ၀ါးမစားချင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့တော့ ဇီယာရွက်ထူပင်အရွက်ကို ရေနဲ့ပြုတ်ပြီးရလာတဲ့ပြုတ်ရည်ကိုသောက်နိုင်ပါတယ်။
နှာခေါင်းပိတ်ပါက ဇီယာရွက်ထူပင်အရွက်ကို လက်ထဲပွတ်ချေကာ ရှုပေးခြင်းဖြင့် နှာခေါင်းပိတ်ခြင်းကို သက်သာပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်။
အရေပြားထိခိုက်ရောင်ရမ်းတာတွေဖြစ်ပါက ဇီယာရွက်ထူအရွက်ကို ရေစင်အောင်ဆေးကာ ကြေအောင်ထုထောင်းပြီး ဖြစ်တဲ့အရေပြားနေရာပေါ်ကို ပုံပါ။ပြီးရင် အ၀တ်ထူနဲ့စည်းထားပါ။
ဗောက်ခဏခဏထတတ်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင် ဇီယာရွက်ထူအရွက်ပြုတ်ရည်ဖြင့် မကြာခဏခေါင်းလျှော်ပေးပါက ဗောက်ထခြင်းကိုပျောက်ကင်းသက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
အိပ်မပျော်တဲ့သူတွေ၊ခေါင်းမကြာမကြာကိုက်တတ်တဲ့သူတွေ၊ရာသီပေါ်ရင်ကိုက်ခဲနာကျင်တတ်လေ့ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေဆိုရင် ဇီယာရွက်ထူအရွက်ကိုအခြောက်လှမ်းကာ ရေနွေးထဲလက်ဖက်ခြောက်ခတ်မယ့်အစား အဲ့အရွက်ခြောက်ထည့်ခတ်ပြီး မကြာခဏသောက်ပေးပါက အိပ်မပျော်တာ၊ခေါင်းမကြာခဏကိုက်တာ၊ရာသီပေါ်ရင်ကိုက်ခဲနာကျင်တာတွေကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
အဆုံးသတ်အနေနဲ့ပြောရရင် ဇီယာရွက်ထူပင်ဟာ ကျန်းမာရေးအတွက်ပဲအသုံးဝင်တာမဟုတ်ပါဘူး။သူ့ရဲ့စူးရှတဲ့ရနံ့ကြောင့် သူ့ကို ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်အနေနဲ့လည်း သုံးကြပါတယ်။
ဇီယာရှကျထူပငျကို အင်ျဂလိပျလို Country borage,Indian borage,Mexican Mint,Spanish thyme စသဖွငျ့အမြိုးမြိုးချေါကွပါတယျ။
ရုက်ခဗဒေနာမညျကတော့ Coleus aromaticus Benth. ဖွဈပါတယျ။
မြိုရငျးကတော့ Labiatae ပါ။
မွနျမာနိုငျငံအနှံအပွားမှာ အလကေ့ပြေါကျပငျအနနေဲ့သျောလညျးကောငျး စိုကျပြိုးပငျအနနေဲ့သျောလညျးကောငျး တှရေ့နိုငျပါတယျ။
နှဈရှညျခံပငျပြော့ ပငျငယျမြိုးဖွဈပါတယျ။အရှကျမှာထူပွီး မကျြနှာပွငျနှဈဖကျစလုံးမှာ အမှေးနုလေးတှပေါရှိပါတယျ။အရှကျပုံစံက ဘဲဥပုံရှိပွီး ကွီးမားကယျြပွနျ့ပါတယျ။ရှကျနားတှနျ့ရှိပွီး စူးရှရှရနံ့ရှိပါတယျ။အပှငျ့မှာအလှနျသေးငယျပါတယျ။အသီးအနနေဲ့တော့ရှညျလြားပွီး အမွှောငျးခွောကျမွှောငျးပါရှိပါတယျ။
ဇီယာရှကျထူပငျမှာ Volatile oil,diterpenes(forskolin)စတဲ့ဓါတုဒွပျပေါငျးတှပေါဝငျပါတယျ။
ဒီလိုဒွပျပေါငျးတှပေါတဲ့အတှကျ ဇီယာရှကျထူပငျဟာ ဘကျတီးရီးယားပိုးမြားကိုသစေနေိုငျသောအစှမျးသတ်တိ၊လရှေုပွှနျကိုကယျြစသေောအစှမျး၊ရောငျရမျးနာကငျြမှုတှကေိုလြော့ပါးသကျသာစသေောအစှမျးသတ်တိ တှရှေိပွီး ကနျြးမာရေးအတှကျ အလှနျအထောကျအကူပွုပါတယျ။
ဇီယာရှကျထူပငျကို နှာစခြေောငျးဆိုးရောဂါ၊ပနျးနာရငျကပျြရောဂါ၊ဝမျးပကျြဝမျးလြှောရောဂါ၊ဝမျးကိုကျရောဂါ၊နားရောဂါတို့အတှကျ တိုငျးရငျးဆေးဖျောစပျရာမှာ တခွားဆေးဘကျဝငျအပငျပစ်စညျးတှနေဲ့အခြိုးကရြောပွီး သုံးလရှေိ့ပါတယျ။
ဇီယာရှကျထူပငျရဲ့အိမျတှငျးသုံးဆေးမွီးတိုအနနေဲ့ အသုံးဝငျပုံကတော့ အောကျပါအတိုငျးဖွဈပါတယျ။
ခြောငျးဆိုးတာ၊လညျခြောငျးနာတာဖွဈပါက ဇီယာရှကျထူပငျ အရှကျကိုရစေငျအောငျဆေးပွီး
အရှကျအစိမျးလိုကျ ဝါးမစားခငျြတဲ့သူတှအေနနေဲ့တော့ ဇီယာရှကျထူပငျအရှကျကို ရနေဲ့ပွုတျပွီးရလာတဲ့ပွုတျရညျကိုသောကျနိုငျပါတယျ။
နှာခေါငျးပိတျပါက ဇီယာရှကျထူပငျအရှကျကို လကျထဲပှတျခကြော ရှုပေးခွငျးဖွငျ့ နှာခေါငျးပိတျခွငျးကို သကျသာပြောကျကငျးစနေိုငျပါတယျ။
အရပွေားထိခိုကျရောငျရမျးတာတှဖွေဈပါက ဇီယာရှကျထူအရှကျကို ရစေငျအောငျဆေးကာ ကွအေောငျထုထောငျးပွီး ဖွဈတဲ့အရပွေားနရောပျေါကို ပုံပါ။ပွီးရငျ အဝတျထူနဲ့စညျးထားပါ။
ဗောကျခဏခဏထတတျတဲ့သူတှအေတှကျဆိုရငျ ဇီယာရှကျထူအရှကျပွုတျရညျဖွငျ့ မကွာခဏခေါငျးလြှျောပေးပါက ဗောကျထခွငျးကိုပြောကျကငျးသကျသာစနေိုငျပါတယျ။
အိပျမပြျောတဲ့သူတှေ၊ခေါငျးမကွာမကွာကိုကျတတျတဲ့သူတှေ၊ရာသီပျေါရငျကိုကျခဲနာကငျြတတျလရှေိ့တဲ့အမြိုးသမီးတှဆေိုရငျ ဇီယာရှကျထူအရှကျကိုအခွောကျလှမျးကာ ရနှေေးထဲလကျဖကျခွောကျခတျမယျ့အစား အဲ့အရှကျခွောကျထညျ့ခတျပွီး မကွာခဏသောကျပေးပါက အိပျမပြျောတာ၊ခေါငျးမကွာခဏကိုကျတာ၊ရာသီပျေါရငျကိုကျခဲနာကငျြတာတှကေို သကျသာစနေိုငျပါတယျ။
အဆုံးသတျအနနေဲ့ပွောရရငျ ဇီယာရှကျထူပငျဟာ ကနျြးမာရေးအတှကျပဲအသုံးဝငျတာမဟုတျပါဘူး။သူ့ရဲ့စူးရှတဲ့ရနံ့ကွောငျ့ သူ့ကို ဟငျးခတျအမှေးအကွိုငျအနနေဲ့လညျး သုံးကွပါတယျ။